Madeira oo kulamo siyaasadeed ka wada Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Madeira oo kulamo siyaasadeed ka wada Muqdisho
Ku dhawaad tobankii maalin ee la soo dhaafay, waxaa magaalada Muqdisho laga dareemayay dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo xaaggan kaas oo ay gadaal ka riixeen wakiillada Beesha Caalamka.
MUQDISHO, Soomaaaliya – Tan iyo markii qaar ka mid ah Madaxda Dowlad Goboleedyadu si cad u diideen baaq uu Madaxwenaha waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo, u diray DG iyo gobolka Banaadir, waxaa masuuliyad xooggan isa saaray wakiillada Beesha Caalamka oo ay hoggaaminayaan Yamamooto iyo Sawan.
Hadda, Wakiilka Gaarka ah ee Guddoomiyaha Midowga Afrika, Danjire Francisco Madeira, ayaa sheegay in uu kulamo la yeeshay Madaxweynayaasha Jubaland, Puntland, iyo Galmudug Hirshabeelle, oo dhamaantood ku sugan caasimadda dalka.
Kulamada uu Madaxa AMISOM, Danjire Madeira, la yeeshay Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada ayaa lagu sheeyay in u jeedkoodu ahaa loogana hadlay caqabadaha hor taagan doorshooyinka, iyo sidii loo hir galin lahaa doorashooyin waqtigooda ku dhaca oo ku qotoma heshiiskii 17-kii September.
Madeira wuxuu muujiyay in hoggaamiyayaashu ay diyaar u yihiin inay si qoto dheer u eegaan arimaha taagan, isla markaana ay wadahadalo hufan oo wax ku ool ah sa la galaan cid kasta si loo gaaro xalka kama danbeysta ah.
Danjire Francisco Madeira, oo aan wali la kulmin Madaxweynaha Koofur Galbeed Cabdicasiis Lafta-gareen ayaa sheegay in wada-hadalladu sii socon doonaan.